Ataovy sérieux e… - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mba taitra ihany ny tena nandre an’ity kandida iray nilaza fa ny azy irery no hita eo amin’ny ilan’ny bileta tokana. Sao mba fiangarana izany hoy ny tena. Kandida sivy ve dia tsy azo nozaraina roa ny bileta tokana ka efatra tatsy ary ny dimy taroa amin’ny ilany na ny mifamadika amin’izay ? Fa mbola tsy hita tokoa hatreto ilay endriky ny bileta tokana ofisialy. Ka tsy fantatra na marina ilay voalaza na mbola tsaho fotsiny ihany sy fanentanana ambony vavahady. Fa raha marina aloha dia mahavariana ihany ity fomba fiasa eto ity. Toa misy tondroin’ny vintana arindran’ny olombelona izy izany.
Fa asan’ny CENIT moa izany resahina izany dia indro mbola asan’ny CENIT foibe ihany ity manaraka ity. Nitafa tamin’ny mpampita vaovao ilay filohan’ny CENIT mpisolo toerana. Resaka fandrindrana ny fifidianana ao Antananarivo Renivohitra no niantsoana mpampita vaovao. Fa angaha moa tsy misy ny CENIT isam-paritra no dia noraisin’ny CENIT foibe izany fandrindrana ny fitantanana ny fifidianana ao Antananarivo Renivohitra izany ? Izay ilay nahatonga ny fahatairana raha nisy io hoe kandida tokana no hita eo amin’ny tsanganana ilany raha azo natao maromaro no indray miaraka. Fa hiverenana ny nambaran’ny filohan’ny CENIT foibe. Nambara fa ho avy ny faran’ny herinandro teo (daty : 18 jolay izany) ny lisitra ahafahan’ny mpifidy mijery ny anarany. Dia tsy tonga araka izay daty voatondro izay aloha ilay lisitra fa io alatsinainy takariva io vao tonga ny an’ny fokontany sasany. Ny fokontany hafa dia miandry. Moa tsy efa zatra miandry koa va isika Malagasy ka ho taitra amin’izany intsony ?
Tsy hoe malahelo havana mahazo tombontsoa akory fa mba manontany tena ihany moa va tsy misy olana afa-tsy ny ao Antananarivo ka izy ireo irery no omena lisitra fahatelo ho jerena fa y kaominina sasany tsy omena izay sata sy voninahitra omena ny renivohitr’i Madagasikara izay ? Fa moa ve tsy mitovy ny lanjan’ny vaton’ireo any amin’ny tany lavitra andriana sy an’ireo mafy ady ao Antananarivo na ireo matretre ao ? Mitovy re ny olom-pirenena Malagasy tsirairay e ka ampitovio tokoa.
Dia indro fa mifanipaka toa valala ankarona indray koa ny eto amin’ny fitondrana mpanatanteraka. Nilaza ny Minisitry ny fanabeazana fa tsy namoaka naoty fandrarana ny fanaovana propagandy ny Minisitera tantaniny. Taitra ihany ny tena nandre izany satria toa milaza izany fa afaka mamoaka naoty izany io Minisitera io handrara fampielezan-kevitra. Tena mba ataovy sérieux ho’aho ity resaka ity.
Ny ao amin’ny Minisiteran’ny Atitany indray kosa anefa amin’ny alalan’ny Sekretera Jeneralin’ity Minisitera ity dia nilaza fa tsy hanome lalana an’ireo mangataka ny hanao fampielezan-kevitra amin’ny toerana manakaiky ny toeram-panadinana (famoriam-bahoaka, fitetezana antongotra na fiara mampiasa fanamifasam-peo…) ny sampandraharaha eo ambany fiadidian’ity Minisitera ity. Tsy fandrarana angamba izany ara-bakiteny fa mitovy ihany ny vokany. Tsy nanome naoty ny Ministeran’ny Fanabeazana satria tsy anjarany izany. Raha nanome izy no tena nampitolagaga. Fiangaviana no nataony. Fa anjarany ve izany sao mba anjaran’ny CENIT kosa no miantso sy miangavy fa raha ny fitondrana foibe dia lasa fanerena hatrany no fandraisana azy.
Dia isan’ny mahatalanjona amin’ireo mpikarakara hetsika toy ny débat hifanatrehan’ny kandida koa izany. Moa tsy ity andron’ny talata hanaovana ny CEPE ity no tokony natao ny fifanatrehan’ireo kandida rehefa ho natao ihany ? Ity no andro maivamaivana ny fampielezan-kevitra. Sa, manandro ireo ao amin’ity fikambanana lehibe mikarakara ny fifanatrehan’ireo kandida ireo ? Tsetsatsetsa tsy aritra ihany izany.
Farany, maro no manome tsiny an-dRavalomanana mirotsaka mivantana manohana an’ireo kandida TIM. Milaza ireo mpanakiana fa tsy hifidy an-dRavalo ange no tanjona e (Tsy vote par procuration ange no hatao hoy ry zareo mpanakiana ireo)… Izao hirotsaka koa i Boaikely na i Andry Rajoelina izany. Miandry ny fanakianan’ireo mpanakiana voalaza teo indray isika fa raha tsy izany mantsy dia lasa tsy fitiavana an’i Dada ilay fanakianana teo aloha teo. Efa hita mirotsaka koa ny filohan’ny antoko sasany. Lojika ange ny firotsahan’ny filohan’ny antoko izay manana kandida any rehetra any e. Sérieux ilay antoko raha mirotsaka mandresy lahatra ny filohany.
Anjaran’ny mpifidy ny haha-sérieux ny vokatra. Azy ireo tsirairay avy no mahay mifantina izay tena hahasoa ny tanana honenany. Izay no hanton-dresaka nitafatafana anio. Mazotoa.